Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဗမာ လူမျိုးကြီး ဝါဒနှင့် ဗမာ့ သတ်မတော် စစ်ခွေးတွေက ကချင် လူမျိုးတွေကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် နေပြီ
ဗမာ လူမျိုးကြီး ဝါဒနှင့် ဗမာ့ သတ်မတော် စစ်ခွေးတွေက ကချင် လူမျိုးတွေကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် နေပြီ
at 10/02/2016 12:14:00 PM
Khin Maungoo shared Zai Wa Mung Wawhkyung's photo.
Zai Wa Mung Wawhkyung with Mg Mg Soe and 49 others.
ဓာ တု အ ဆိပ် ပါ တဲ့ လက် နက် နဲ့ ဗ မာ စစ် ခွေး တွေ က လိမ် ဆင် လက် နက် ကြီး ပစ် ပါ တယ်။ တက် လာ တဲ့ ခွေး ကို Gidon မှာ တွန်း လှန် ပစ် လိုက် ပြီ။ Lai Hpong တောင် အောက် မှာ တော့ စစ် ခွေး အ လောင်း ပုံ နေ ပြီ။
(၄) လ ပတ် ယ နေ့ ပြီး ပါ ပြီ။ မပခ မျက် နှာ ရှုံ့ မဲ့ နေ ပါ ပြီ။
GIDON HTE LAI HPONG GASAT POI BAI BYIN
Gidon post de 8:45 kon sinat kaba gap nna myen ni htim lung wa ai majaw 9:10 am. kon 10:00 am. du hkra gasat poi byin ai. Myen ni hpe ninghkap manga kau dat sai. Sinat kaba hta ''gung nsa (Chemical Weapon)'' gap bun ai lam nga ai.
Lai Hpong bum npu Lai Ma Hkyet kaw 9:00 am. kon myu tsaw ni myen dap ni hpe htim gasat shagrawt nga ai lam chye lu ai.
(Wunpawng mung shawa ni myu tsaw niamatu akyu hpyi ya nga ga law )
တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနိုင် ဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ စာပေးပို့
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင် ဖို့အတွက် မြစ်ကြီးနားမြို့ အခြေစိုက် PCG ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ က နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ စာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စာရေးသားပေးပို့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဆန်းအောင် က ပြောပါတယ်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ကဇူးကျေးရွာရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် အင်ခရန်း တောင်ကြောတလျှောက် ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်ရဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စက်တင်ဘာ လလယ်ပိုင်းကစပြီး အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေအကြား ဒီကနေ့အထိ တိုက်ပွဲရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ ကေအိုင်အေတပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃ နဲ့ လှုပ်ရှားတပ်ရင်း ၂၅၂ တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ ပြောပါတယ်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကို ကေအိုင်အေက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာလို့ အစိုးရတပ်မတော်က ပြောသလို အစိုးရတပ်ဘက်က အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာလို့ ကေအိုင်အေ ဘက်က ပြောထားပါတယ်။
ရက်ရှည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအကြား နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
နှစ်ဘက် ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို ရပ်တန့်ပြီး၊ မိုင်ထောင်တိုက်ခိုက်တာ၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေ မလုပ်ကြဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇခေါင်ခမ်းရယ်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးဆိုတင်သွင်းရာမှာ လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။